काठमाडौं, मंसिर ११ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलको संसदीय दलमा वा प्रतिनिधिसभामा बहुमतको विश्वास नगुमाउँदै राजीनामा दिन नमिल्ने संविधानविद डा. बिपिन अधिकारीले बताउनुभएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्ने कुनै आधार नरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलको घेराबन्दीमा पर्नुभएका बेला गोरखापत्र अनलाइनसँग संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै डा. अधिकारीले भन्नुभयो, “जसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यहाँ बहुमत नगुमाउँदै कसैको चाहनाकाआधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीसँग अहिले बहुमत छ, राजीनामा दिने कुरै हुँदैन ।” प्रक्रियाअनुसार अहिले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लग्ने अवस्था पनि नरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।